ऋण नतिरेपछी मुकेशका भाई अनिल अम्बानीको कार्यालय बैंकद्वारा कब्जा ! - News & Entertainment
ऋण नतिरेपछी मुकेशका भाई अनिल अम्बानीको कार्यालय बैंकद्वारा कब्जा !
रिलायन्स ग्रुपका प्रमुख अनिल अम्बानीको मुम्बइस्थित मुख्य कार्यालय बैंकले कब्जा गरेको छ ।
समाचार एजेन्सी पीटीआइका अनुसार निजी क्षेत्रको यस बैंकले २ हजार ८९२ करोड रुपैयाँ बाँकी ऋण नतिरेपछि अनिल धीरुभाइ अम्बानी ग्रुपको सान्ता क्रुज मुख्यालय कब्जा गरेको हो ।
अनिल लगातार ऋणमा डुब्दै गइरहेका छन् र उनको व्यवसाय तहसनहस भएको छ । उता उनका दाजु मुकेश अम्बानी भने यसै साता विश्वकै पाँचौं धनीको स्थानमा उक्लिएका थिए ।
बैंकले कब्जा गरेको मुख्यालय २१ हजार ४३२ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले ऋण नतिरेका कारण यस बैंकले दक्षिण मुम्बइका दुई फ्ल्याट पनि कब्जा गरेको छ । यी दुवै सम्पत्ति मुम्बइको नागिन महलमा छन् । यी दुई फ्ल्याट १ हजार ७१७ वर्ग फुट र ४ हजार ९३६ वर्गफुट क्षेत्रफलका छन् । बैंकले सूचना जारी गर्दै यी कब्जा गरिएका सम्पत्तिका विषयमा कुनै लेनदेन नगर्न सबैलाई सूचित गरेको छ ।
सुनको मुल्य तोलामा लाख नाघ्यो
पाकिस्तानले पनि जारी गर्‍यो कश्मीरसहित समेटेर नयाँ नक्सा